Ibonwe kangaphi 1,717 (Ama)Ixesha #Ubawo #Umama #UThixo uElohim
Nabani Na Otyhila Ubulungisa Bakhe Soze Angene eBukumkanini Bamazulu
UThixo wayehlala evumela ukuba iTyeya yoMnqophiso ihlale ingaphambili ze amaSirayeli alandele emva kwayo, ngexa ebakhokela entlango iminyaka engamashumi amane, nangexa ebavumela ukuba boyise isixeko seYeriko, bangene kwilizwe laseKanan.
UKristu uAhnsahnghong noThixo uMama Bavele njengoNdoqo weTyeya yoMnqophiso kwiLixa loMoya Oyingcwele
Amalungu eBandla likaThixo anqwenela ukungena kwiKanan yasezulwini ngokulandela iimfundiso zikaThixo uElohim ovele njengeTyeya yoMnqophiso, ze babeneloyiso ebomini babo bokholo, ngokufunda izifundo kwimbali yamaSirayeli endaweni yokulandela iingcinga zabo.
Ndabona, nantso iMvana imi phezu kwentaba yeZiyon… Aba ngabo bangadyobhekanga ngabafazi, kuba benyulu. Aba ngabo bayilandelàyo iMvana apho isukuba isiya khona. Aba báthengwa bephuma ebantwini, baziintlahlela kuye uThixo nakuyo iMvana.